Laser tingcha Sublimated Egwuregwu na n'uwe na Vision Igwefoto - Goldenlaser
Flatbed CO2 Laser tingcha Machine
Dugbọ Mmiri Ventilation
Kapeeti & ute
Foto dị na foto
Gịnị kpatara Goldenlaser
Laser Cutting nke Sublimated Egwuregwu na n'uwe na Vision Camera System
Vision Laser tingcha maka Sublimation n'uwe Mmeputa
Nnukwu ọsọ na-efe efe na-enyocha mpempe akwụkwọ mpịakọta na-eburu n'uche ịwepu ma ọ bụ ntụgharị ọ bụla nke nwere ike ime n'oge usoro sublimation na bechapụ atụmatụ ọ bụla.
Dye-sublimation Trend na-akwọ ụgbọala Ejiji, Fitness na Sports Clothing Mmeputa.
Uwe na ngwa nke ejiji na-aga n'ihu, na-emekarị ma n'otu oge ahụ ntụsara ahụ na arụmọrụ ka a na-achụ mgbe niile. Uwe a na-edozi n'okpuru na-enye ihe niile na ndị ọzọ.
Ọchịchọ maka ụdị mmadụ pụrụ iche na ụdị ejiji na ụlọ ọrụ akwa na-atụnye ụtụ nke ukwuu na ewu ewu nke uwe sublimation. Ọbụghị naanị ụlọ ọrụ ejiji kamakwa uwe eji arụ ọrụ, uwe mgbatị ahụ na uwe egwuregwu yana uwe ejiji dị iche iche ewerela mmasị maka akwụkwọ edemede a na-acha akwụkwọ ndụ-ebe ọ bụ na ọ na-enye ohere dị ukwuu maka ịhazi ya na enweghị ike imewe ya.
Ihe ngosi ndi ahia anyi
Laser ọnwụ nke dai-sublimation Mbipụta
Laser ọnwụ bụ ihe kasị ewu ewu ọnwụ ngwọta maka egwuregwu ụlọ ọrụ. Dị ka a na-eduga laser soplaya maka akwa ụlọ ọrụ, Golden Laser ulo oru na elu na-agba ọhụụ laser ọnwụ usoro maka elu ọsọ ọnwụ sublimation akwa na na-akpaghị aka na-akpaghị aka. Na-aga n'ihu ọhụrụ, Golden Laser mgbe niile na-elekwasị anya na-eke kacha uru maka ndị ahịa anyị.
Ahụkarị laser ngwa maka sublimation egwuregwu
Jersey (basketball jersey, bọọlụ bọọlụ, baseball jersey, hockey)
Weargba ígwè eyi
Uwe eji arụ ọrụ
Weargba egwu agba / Yoga eyi
Laser ọnwụ nke sublimation e biri ebi egwuregwu
The ọhụụ laser ọnwụ automates usoro nke ịcha si dai sublimation e biri ebi iberibe nke akwa ma ọ bụ akwa na ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi, na-akwụ ụgwọ maka ihe ọ bụla distorges na erukwa na-erukwa na-ejighị n'aka ma ọ bụ stretchy textiles dị ka ndị na-eji egwuregwu.
Laser ọnwụ nke dai-sublimation hockey Jersey
0.5mm ịcha nkenke
ụgwọ mmezi dị ala
Mụta ihe banyere ọhụụ laser cutter
Laser ọnwụ nke sublimated activewear
ỌHASRAS LASER CUT dị mma maka ịkpụcha egwuregwu karịsịa n'ihi ike ya ịkpụcha ihe ndị dị egwu na nke gbagọrọ agbagọ - ụdị nke ị nwetara na egwuregwu egwuregwu (dịka uwe ndị otu, uwe mmiri na wdg)
Olee uru nke laser ọnwụ?
- Ihe niile dị na akpaka, ụgwọ dị ala
Cha mma mma
Ihe nwere ntụpọ?
Emela, n’ihi na contactless laser nhazi
Dọrọ na ihe?
Olee ọhụụ ọhụụ laser ọrụ?
ỌR MOD Edị 1
→ Nyochaa na ada
Mee ka usoro mmepụta niile dị mfe. Automatic ọnwụ maka mpịakọta akwa
Chekwaa ngwa ọrụ na ụgwọ ọrụ
Nsonaazụ dị elu (500 setịị jersey kwa ụbọchị kwa ngbanwe n'otu - naanị maka ntụgharị)
Enweghị chọrọ faịlụ eserese mbụ
→ Nyochaa ndekọ aha
Maka ihe ndị dị nro dị mfe ịgbagọ, curl, gbasaa
N'ihi na mgbagwoju anya ụkpụrụ, nesting ụkpụrụ n'ime guputa na elu kpọmkwem ọnwụ chọrọ
Gịnị bụ Vision Laser System Uru?
HD ulo oru ese foto
Igwe foto na-enyocha akwa ahụ, chọpụta ma mata akara ngosi e biri ebi, ma ọ bụ bulie akara ndebanye aha ma belata atụmatụ ndị ahọpụtara na ọsọ na izi ezi.
Kpọmkwem laser ọnwụ
Ezi ọnwụ na oke ọsọ. Ọcha dị mma na nke zuru oke - enweghị imegharị ihe mpempe akwụkwọ dị mkpa.
Ortionkwụ ụgwọ mmeghasị
Ọhụụ Vision Laser na-akwụ ụgwọ na-akpaghị aka maka mmejọ ọ bụla ma ọ bụ gbatịa na akwa ọ bụla ma ọ bụ akwa.
Na-aga n'ihu nhazi
Ebu usoro na akpaaka feeder maka n'ụzọ zuru ezu-akpaka laser nhazi kpọmkwem site mpịakọta.
Anyị na-akwado usoro laser ndị a
n'ihi na dijitalụ e biri ebi egwuregwu egwuregwu:
Golden Laser nyochara nke ọma nhazi ihe achọrọ n'ọhịa egwuregwu, ma bido usoro nhazi laser akpaghị aka iji melite nhazi nke egwuregwu, na-eme ka usoro mmepụta dị mfe, na-azọpụta ọtụtụ ọrụ na oge na-efu.
Vision ịgụ isiokwu Laser tingcha Machine
Inyocha More Laser Machines
"Onweghị ihe dị ọsọsọ karịa igwe a; ọ nweghị ihe dị mfe karịa igwe a!"
Kedu ụdị laser?
Anyị nwere teknụzụ nhazi laser zuru ezu, gụnyere ịchacha laser, ịkpụcha laser, perforating laser na akara laser.
Chọta anyị laser igwe
Nwalee gị ihe, na-ebuli usoro, -enye video, nhazi kwa, na ndị ọzọ, n'efu.
Gaa na ngosipụta ihe ngosi
Mee ka ihe ndị ụlọ ọrụ na-achọ sikwuo ike, site na iji azịza ngwa ngwa laser akpaghị aka na ọgụgụ isi iji nyere ndị ọrụ aka ịmepụta ma zụlite.
Copyright © 2005-2021 Wuhan Golden Laser Co., Ltd. Ikike Niile Echekwabara.